၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သော LucksCasino.com သည်လောင်းကစားခြင်းကိုနှစ်သက်သောသူများအားအရည်အသွေး၊ ဖျော်ဖြေမှုများပေးရန်၊ သူတို့ကိုပျော်ရွှင်မှု၊ မျှတမှု၊ တရားမျှတမှု၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်လုံခြုံမှုနှင့်ပျော်ရွှင်စရာအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းတွင်ပြုလုပ်ရန်အခွင့်အရေးပေးခြင်းအားဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
LucksCasino.com ၏ပစ္စည်းအား Soho Office 3A၊ Edge Water Complex၊ Elia Zammit လမ်း၊ စိန့်ဂျူလီယန်နိုင်ငံ၊ ProgressPlay လီမိတက်ကလည်ပတ်သည်။ ProgressPlay သည်မော်လတာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကန့်သတ်ထားသောတာ ၀ န်ခံကုမ္ပဏီဖြစ်သည် (C58305) Malta Gaming Authority မှလိုင်စင်ချထားပေးပြီး၊ အောက်မှာလည်ပတ် MGA / B2C / 231/2012 လိုင်စင်နံပါတ် 16 Aprilပြီ, 2013 ရက်တွင်ထုတ်ပေးခဲ့သည်; နှင့်အာဏာပိုင်များကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်နှင့်လိုင်စင်နှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည် လောင်းကစားကော်မရှင်, လိုင်စင်နံပါတ်: 000-039335-R-319313-016 ။
လောင်းကစားခြင်းသည်အဖြစ်မှန်မှအနားယူရန်၊ အနားယူရန်နှင့်ကောင်းမွန်သောအချိန်ရရန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကစားသမားများအနေဖြင့်ဆုကြီးများရလို။ သူတို့၏အိပ်မက်များကိုအကောင်အထည်ပေါ်စေလိုသဖြင့်တာ ၀ န်ရှိသည့်ကစားနည်းများကို ပို၍ အရေးကြီးသည်။ ဤအရာကိုမြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းဝင်များကိုသူတို့ကစားရန်ပိုက်ဆံပမာဏကိုထိန်းချုပ်ရန်အွန်လိုင်းကိရိယာများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးထားသည်။ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အားလုံးတွင်တရားမ ၀ င်သည့်အသက် ၁၈ နှစ်အောက်သူများကတားဆီးခြင်းဂိမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ကတင်းကြပ်စွာလိုက်နာသည်။
LucksCasino.com သည်နောက်ဆုံးပေါ် 128 bit bit Secure Socket Layer (SSL) စာဝှက်ခြင်းနှင့် firewall နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးအထိခိုက်မခံသောဒေတာများကိုအင်တာနက်မှကျွန်ုပ်တို့၏ကာကွယ်ထားသောဆာဗာများသို့လုံခြုံစွာလွှဲပြောင်းပေးသည်။ အွန်လိုင်းခရက်ဒစ် / ဒက်ဘစ်ကဒ်စနစ်ကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီများကကိုင်တွယ်သည်။ LucksCasino.com သည်၎င်းကိုအသင်းဝင်များကို e-wallet ၀ န်ဆောင်မှုမျိုးစုံပေးသည်။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ရရှိနိုင်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက။
Our goal is to achieve the highest level of member satisfaction by providing excellent and professional services. We haveaknowledgeable and experienced support team available 24/7 to address any questions or concerns you may have. Please do not hesitate to ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်ပုံစံ၊ အီးမေးလ် (သို့) တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်းမှတဆင့်အချိန်မရွေး ...
LucksCasino.com ProgressPlay လီမိတက်၏ Soho ရုံး 3A၊ Edge Water Complex၊ Elia Zammit လမ်း၊ စိန့်ဂျူလီယန်၊ ProgressPlay သည်မော်လ်တာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကန့်သတ်ထားသောတာဝန်ယူမှုရှိသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည် (C58305), ၎င်းသည်လိုင်စင်နှင့်မော်လ်တာဂိမ်းကစားခြင်းအာဏာပိုင်တို့ကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသော ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ 16ပြီ ၁၆ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော MGA / B2C / 231/2012 လိုင်စင်နံပါတ်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်သည်; နှင့်လိုင်စင်နှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည် လောင်းကစားကော်မရှင်, လိုင်စင်နံပါတ် 000-039335-R-319313-016 ။ ဝဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်ဂရိတ်ဗြိတိန်မှလောင်းကစားသူများသည်လောင်းကစားကော်မရှင်မှထုတ်ပေးသောလိုင်စင်ကိုမှီခိုနေကြသည်။ လောင်းကစားသည်စွဲလမ်းစေနိုင်သည်။ တာဝန်သိကစားကစားပါ။
ပစ္စည်းမူပိုင်© 2019 LuckCasino